Nlanarị nke nnukwu nwamba Afrịka: ndị ọkachamara anụ ọhịa na ndị njem na -echegbu onwe ha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Nlanarị nke nnukwu nwamba Afrịka: ndị ọkachamara anụ ọhịa na ndị njem na -echegbu onwe ha
omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nnukwu nwamba Africa
Icheta ụbọchị ọdụm ụwa n'ọnwa a, nchekwa nchekwa anụ ọhịa n'Africa na -echegbu onwe ya maka ọdịnihu nke otu nnukwu nwamba ya dị n'Africa - ọdụm - na kọntinent ahụ mgbe ọnụọgụ ndị na -achụ nta na -achọ akụkụ ahụ ha. Ndị otu na -ahụ maka nchekwa anụ ọhịa na ndị ọrụ ebere na Afrịka na -echegbu onwe ha maka ịrị elu ọdụm, ọkachasị na West Africa ebe anụmanụ ndị a ama ama nọ n'ihe egwu dị egwu, ebe ịchụ nta amụbaala n'ofe mpaghara ọwụwa anyanwụ na ndịda Africa.
Ịrị elu na -achọ akụkụ ọdụm na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia akwalitela ịchụ nta na Africa.
Mwakpo nke ndị na -elekọta anụ ụlọ n'ogige nchekwa anụ ọhịa emeela ka esemokwu dị n'etiti ndị na -elekọta anụ ụlọ na -awagharị awagharị.
Nke a na -ebute ogbugbu ọdụm site na nsi, mgbọ na ube, na akụ ndị nwere nsí.
“Mmejọ dị elu nke nsi odum ekwupụtakwala n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka ka obodo ndị na -awagharị awagharị na -emegwara mgbe mwakpo wakpo anụ ụlọ ha, ”Edith Kabesiime, onye njikwa mgbasa ozi anụ ọhịa na ụlọ ọrụ Africa na -ahụ maka nchekwa anụmanụ na Africa na Kenya kwuru.
Ebe mgbaba nsọ - Ogige Ngorongoro
O kwuru na arịrịọ maka ngwaahịa ọdụm, dịka ọkpụkpụ na ezé, na ụlọ ọrụ ọgwụ na-eto ngwa ngwa emeela ka ịchụ nta ha dị n'ọhịa Africa.
Kabesiime kwuru na ihe iyi egwu ndị ọzọ nke ọdụm Africa gụnyere ịchụ nta na ịchụ nta iko, na -agbakwụnye na imebe iwu ọhụrụ, ụkpụrụ, na mkpọsa dị elu bụ ihe dị mkpa maka ịchekwa anụ na ịkwagide nkwụsi ike nke ebe obibi nke kọntinent ahụ.
A na -eme atụmatụ na ọnụ ọgụgụ ọdụm ndị Afrịka agbadala ihe ruru 50% n'ime afọ iri abụọ na ise gara aga. Ndị ọkachamara na -ahụ maka nchekwa kwuru na enwere ezigbo ihe iyi egwu na nlanarị ọdachi ga -efunahụ ebe obibi ya, mkpagbu sitere na ọgụ mmadụ, yana ịzụ ahịa iwu na -akwadoghị n'akụkụ akụkụ ọdụm.
"Ọdụm na -etolite akụkụ dị oke mkpa nke ihe dị ndụ anyị na ihe ndị dị ndụ, ihe omume a ga -enye aka ọ bụghị naanị ime ka mmadụ mara maka ọnọdụ ha kamakwa iji mee ka ọ pụta ìhè n'ọtụtụ ihe ịga nke ọma ndị ọzọ anyị kwesịrị ịbawanye elu iji hụ na ọdịnihu ha ga -adigide," Touri nke Kenyasm Minista Mazi Najib Balala kwuru.
Ndekọ ọnụ sitere na Nchedo Anụmanụ Ụwa na -egosi na ọnụ ọgụgụ ọdụm Africa ugbu a dị puku 20,000, gbadara ihe dị ka ọdụm 200,000 otu narị afọ gara aga.
South Africa bụ naanị mba kwere ka oke ozuzu ọdụm pụta, ebe a na-edebekarị anụmanụ na ngịga ma ọ bụ na mkpọchi.
Igbu ọdụm maka ọkpụkpụ ha na akụkụ ndị ọzọ apụtawo dịka ihe iyi egwu na -adịbeghị anya. Agbanyeghị na ọkpụkpụ ọdụm esoghị na ọgwụ ndị China ọdịnala, ebe ọnụ ọgụgụ ndị na -agụ agụ na -agbada, ngwaahịa ndị a dị ngwa ngwa na -abanye n'ahịa anụ ọhịa na -akwadoghị dị ka ihe nnọchianya.
Ọdụm bụ anụmanụ na -adọrọ adọrọ nke na -eduga ndị njem nlegharị anya, na -adọkpụ nnukwu ìgwè ndị njem na safari na East Africa.